Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNixon
I-Zen Retreat inika awona mava akhethekileyo aya kuthi ngokuqinisekileyo angalibaleki. Yiba namava omlilo kunye nebhafu yomkhenkce* xa uceliwe * kwaye ukonwabele ukumamela umculo ngelixa uzipholele kwi-tub eshushu kunye nebhafu eshushu yabucala kwigumbi langasese lokulala. Ungaphumla kwaye uphumle ngelixa usapho lwakho lonwabela isantya esiphezulu se-intanethi, i-netflix kunye ne-youtube kwi-intshi engama-49 ye-smart tv eya kugcina wonke umntu onwabile! Ikhaya lethu limi kufutshane nendalo kodwa ikwayimizuzu emi-5 yokuqhuba kwiindawo ezinomtsalane zasekhaya.
Sinezindlu zokulala ezi-3, zonke zifakelwe iibhedi ezisemgangathweni kunye nezithuthuzeli zokuqinisekisa ukuba ufumana ukuphumla kobusuku obuhle.Siphinde songeze izikhuseli zeMattress eziza kwandisa inqanaba lokuthuthuzela ngexesha lokulala kwakho!
1. 49 Intshi Curved Smart tv
2.Netflix eneemuvi ezingaphezu kwe-1000 kunye nothotho lweTV! Kubandakanya uRick kunye noMorty
3. Bhrawuza kwi-Youtube kwaye udlale iingoma zakho ozithandayo ngelixa uzipholele kwii-tubs ezishushu
4. Ijingi yerattan ejonge egadini kangangexesha elithile lokuphumla.
5. Izinto zokudlala zabantwana kunye nebhafu yeqamza
6. Isantya esiphezulu se-Unifi 30 MBPS
7. Indawo entle engqongileyo ebandakanya ichibi kunye neengxangxasi kumgama wokuhamba.
8. Izibonelelo eziqinisekisiweyo kunye nezixhobo eTaiping!
Ubomi abunakukhululeka ngakumbi kunobu! Bhukisha ngoku ukonwabela amava eZen nathi!
4.74 out of 5 stars from 147 reviews
4.74 · Izimvo eziyi-147
Kukho ichibi elihle kumgama wokuhamba kwindawo ukuze upholile kwaye uphumle ngelixa umamele isandi sendalo. Unokupholisa kwaye udiphe kwingxangxasi ekufutshane nawe kumgama wokuhamba ngamava okwenyani wezen!
Umbuki zindwendwe ngu- Nixon
Qhagamshelana nathi nanini na ngexesha lokuhlala kwakho apha kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunceda ngayo nantoni na ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhululekile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Taiping